Xriirka soomaaliyeed ee tenniska oo u qabtay siminaar macalimintiisa u diwan gshanaa 29-30 July 2017 | Xiriirka Soomaaliyeed ee Tenniska
Added by hnaziir1 on August 1, 2017.
Xiriirka Soomaaliyeed ee Teeniska dheer ayaa uqabtay 8 kamid ah macalimiintiisa u diiwaan gashan siminaar soconaya 2 maalmood kaasow kor logu qaadayo aqoonta macalimiinta xiriirka soomaaliyeed ee tenniska .
Siminaarkaas ayaa waxaa daah furaya gudoomiyaha gudiga olompikada somaaliyeed mudane c/lahi axmed tarabi asagow kashekeyay taariiqda uu kulahaa xiriirka tenniska dalka soomaaliya wuxuna kula dardaarmay xiriirka iyo macalimintaba in oo u bahanyahay dalka in dib logu soceliyo ciyaarta tenniska oo mudo badan aan shaqenin ama laga ciyaarinba ciyaarah teeniska .
Siminaarka ayaa soqaban qaabiyeen xiriirka somaliyeed ee tenniska waxaana bixinaayay 3 qabiir katirsan xirirka tenniska waxeyna kala ahaayeen macaliminta bixineysay Abdirahman Mohamed Said gantalman , Hamza Haji Abdi iyo Abukar Omar gedi ku waasow qibrada u leh ciyaarah tenniska.
Macalimiinta qadaneysa siminaarka mudada 2 malin aheyd ayaa shegen in waxbada ey kafaa iideysteen inta uu soconayey waxeyna balaqaaden in ey gaarsiin donaa dhalinta soomaaliyeed .
Ugu danbeentii waxaa soxiray siminaarkaas gudomiye kuxigeenka xiriirka tenniska Ali Hussein Osman Lupe iyo xubin kamid aha gudiga fulinta xiriirka tenniska marwo Suhama Mohamud Aden waxeyna kula dar darmeen macalimiinta in ey gaarsiiyaan waxa ey ka dhaxleeen work shoka umada soomaaliyeed.